UDUBAI: Umzekelo woPhuhliso ... Ukususela kwiZero ukuya kwiHero!
Imibuzo ekhuthazayo nguSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Juni 13, 2019
Dubai: Umzekelo wophuhliso
Kunzima ukukholelwa kunye nokuthabatha ukuba iArabic yahamba
credit: Imifanekiso ye-Dubai kwi-1960 kunye ne-1970 ukubonisa umzi njengentuthuko yeentlango: I-Clocktower ngeenxa zonke kwiindawo zaseDeira ijikelezwe yentlabathi ...
Kwaye ishukumiseka, yonke imihla kukho utshintsho olutsha kwindawo ekungqongileyo. Eli phondo le-United Arab Emirates ngumzekelo ohlukileyo wento esiyibiza ngokuba luphuhliso. Umhlaba wonke umangalisiwe yinto yokuba kwenzeka njani ukuba umhlaba ongenanto, ongenantlabathi kunye nenxalenye yomhlaba oyinkqantosi ube yinto ekuyiyo namhlanje. Ngaphandle kwezixhobo kunye netekhnoloji, esi sixeko siguqulwe ngemiceli mngeni kwaye soyise ezo ezinemibala ephaphazelayo. Kuyandinika ukubanda xa ndizama ukucinga ukuba kungaba nzima kangakanani na ukufikelela kweli nqanaba sele enalo kuwo onke amasimi kuba evelisa ezakhe iimbuyekezo, ezakhela umgangatho wokumiliselwa kwehlabathi kunye netekhnoloji eqhutywa.
Ummandla owawusoloko ugcinwa ngokuloba kunye nokuhamba ngeperele iminyaka eyiwaka, kunye neengxelo zokuqala zedolophu ezenziwe kwi-1799 xa indlu yaseBani Yasisungula njengexhomekeke ku-Abu Dhabi.
I-Dubay yaba yi-Sheikh ehlukileyo kwi-1833 xa ubukhosi base-Al-Maktoum beyithatha ngokuthula. Ukuxinezeleka okukhulu kwe-1929 kubangele ukuwa kweemarike zamazwe ngamazwe, uSheikh Saeed efuna enye inzuzo yemali engenayo kunye kumema amaNdiya kwaye Isi-Iranian Abarhwebi apha ngaphandle kokuhlawula irhafu. Ngeoli yokufumanisa kwi-1966, ilizwe litshintshe ngaphaya kokuqwalaselwa lakhokelela eDubai ekubeni yinto esebenzayo, yale mihla, ishishini umzi ophakathi. Hayi, naliphi na elinye ilizwe belinokucinga ukuba kanye xa isixeko esine-Gulf siya kudlala indima enkulu kuqoqosho lwehlabathi.
Okwangoku, u-Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum ngumongameli we-vice IUnited Arab Emirates kunye nomlawuli we-Emirate yase-Dubai kunye nebhunga lakhe labaphathiswa basebenza kakhulu ukugcina lo mgangatho kwaye bawenza namandla aphezulu ngezicwangciso ezifanelekileyo zokunxibelelana nolwalamano lwamanye amazwe.
Esona siphumo sigqibeleleyo seenzame zabo kukuphunyezwa EXPO 2020, iya kusingathwa yiDubai ethi yanikwa yi-Bureau International Des expositions General Assembly eParis ngo-Novemba ngo-27, 2013. I-Expo kulindeleke ukuba yongeze inani elibalulekileyo le-dirhams kuqoqosho lwase-Dubai kunye UAE.
Leli lizwe kwaye liza kwenza umbane omkhulu kwiimarike zezoqoqosho.
Inkampani yeSixeko sase Dubai ngoku kubonelela ngokulungileyo guides Imisebenzi eDubai. Iqela lethu lagqiba ukongeza ulwazi kulwimi ngalunye kolwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngoko, ngale ngqondweni, unokufumana izikhokelo, iingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates kunye nolwimi lwakho.